ကော့ကော့ကြောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကော့ကော့ကြောင် (အင်္ဂလိပ်: Kodkod) ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ လီယိုပါဒတ် ဂွစ်နာ ဖြစ်သည်။ အမေရိကတိုက်တွင် တွေ့ရသောကြောင်မျိုးရင်းဝင်များအနက် အရွယ်အစား အသေးငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ချီလီနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းဒေသတို့တွင် လည်းကောင်း၊ ယင်းနှင့်တဆက်တစပ်တည်းရှိသော အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရှိ ဒေသများတွင်လည်းကောင်း တွေ့ရသည်။ 
ဦးခေါင်းနှင့်ကိုယ်အရှည်မှာ ၁၆လက်မမှ ၂၁လက်မ အထိ ဖြစ်ပြီး အမြီးအရှည်မှာ ၇လက်မမှ ၉လက်မအထိ ဖြစ် သည်။ အရောင်အသွေးမှာ အညိုဖျော့ဖြစ်ပြီး အညိုရင့်ရောင် အစက်အပြောက်များ ကိုယ်ပေါ်တွင် အတန်း လိုက် တည်ရှိသည်။ ရင်ဘတ်နှင့် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းတွင် အဖြူရောင်သမ်းသည်။ အမြီးတွင် အမည်းကွင်းများ ရှိ သည်။
ကော့ကော့ကြောင်များကို တောင်အမေရိကတိုက်၊ ချီလီနိုင်ငံရှိ အင်ဒီးတောင်တန်း၏ သမပိုင်းမိုးသစ်တောများတွင် တွေ့ရသည်။ အောက်ခြေတွင် ဝါးပင်များ ပေါက်ရောက်နေသောတောအုပ်များတွင် အဓိက တွေ့ရသည်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတွင်လည်း ယင်းတို့ကို တွေ့ရသည်။
သစ်ပင်တက်ကျွမ်းကျင်သော်လည်း မြေပေါ်တွင် အနေများသည်။ မြေကြွက်နှင့် ငှက်များ ကို ဖမ်းယူစားသောက်တတ်သည်။ လူတို့မွေးမြူသော ကြက်များကိုလည်း ဝင်ရောက်ဆွဲတတ်ပြီး ကြက်ဆွဲရန် တစ်ကောင်တည်းမလာဘဲ အုပ်စုလိုက်လာလေ့ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များတွင် ကော့ကော့ ကြောင်၏ အရှည်ဆုံးသက်တမ်းမှာ ၁၁နှစ်ကျော် ဖြစ်သည်။
↑ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "ကာနီဗိုရာ မျိုးစဉ်"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (3rd ed.)။ Johns Hopkins University Press။ p. 538။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Napolitano, C. (2015). "Leopardus guigna". IUCN Red List of Threatened Species 2015. IUCN.
↑ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "Species Leopardus guigna"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (3rd ed.)။ Johns Hopkins University Press။ p. 538။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ Napolitano, C.; Gálvez, N.; Bennett, M.; Acosta-Jamett, G. & Sanderson, J. (2015). "Leopardus guigna". The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 2015: e.T15311A50657245. doi:10.2305/IUCN.UK.2015-2.RLTS.T15311A50657245.en. Retrieved 14 January 2018.
↑ Nowell, K., Jackson, P. (1996) Kodkod Archived 2008-11-12 at the Wayback Machine. In: Wild Cats: status survey and conservation action plan. IUCN/SSC Cat Specialist Group, Gland, Switzerland.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကော့ကော့ကြောင်&oldid=710257" မှ ရယူရန်
ချီလီနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။